Google Zhizha reCode vadzidzi vanovandudza KDE Edu zvakatonyanya | Linux Vakapindwa muropa
Google Zhizha reCode vadzidzi vanoita KDE Edu kunyangwe zvirinani
azpe | | Free Software
Imwe yei zviitiko zvinonakidza zvevadi vemahara software ndiyo Google Zhizha reKodhi, umo vadzidzi vanobva kumatunhu ese epasi vanoshanda mukuvandudza nekuvandudza kwemahara software mapurojekiti. Mune ino kesi, iyo KDE Edu yekudzidzisa software yakagadziridzwa zvakanyanya.
Iyi software package icho chikamu cheiyo KDE chirongwa, Ndivo vanogadzira iyo inozivikanwa KDE Plasma desktop. Mune ino package zvakawanda zvekuzvipira kunyorera zvevadzidzi zvakabatanidzwa, izvo zvinokubatsira iwe kudzidza zvese zvidzidzo nenzira iri nyore uye inonakidza.
Yakakodzera kubasa revadzidzi, ino bundle yeapp yakawana zvirinani gore rino. Semuenzaniso, Stefan Toncu akavandudza mashandisirwo eiyo Minuet application, chirongwa chekudzidza mimhanzi. Iye zvino tinogona kusarudza chimbo chatiri kuda uye kwete chete iyo keyboard yepiano sepakutanga.
vamwe vadzidzi vane tarenda vakaita saDivyam Madaan naRudra Nil Basu, akatevera tsoka dzake, achivandudza iyo Gcompris application, achiwedzera akawanda mabasa. Kana ari Rishabh Gupta naFabian Kristof, ivo vakasarudza kusimudzira kunyorera kwesainzi.
Ava havasi ivo chete vadzidzi vakavandudza chirongwa ichi, asi vamwe vazhinji vakashanda nesimba panguva yeGoogle Zhizha reKodhi mazuva ekuvandudza izvi uye nezvimwe zvinoshandiswa zvekushandisa mahara. KDE yanga ichishanda pamwe neGoogle kubvira 2005, nekuti pasina kupokana tese tinokunda muchirongwa ichi.
Kune rimwe divi, KDE inogamuchira zvinhu zvitsva zvemahara, iyo vashandisi vachanakidzwa. Vadzidzi vanosangana nevanhu, vanodzidza zvakawanda uye zvakare vanoita zita rebasa ravo remangwana. Kana iri yeGoogle, inogona kutora matarenda matsva emangwana, kuwedzera kune mukurumbira wakakura wainayo wekugadzira chirongwa cheiyi saizi.
Kana iwe uchida kurodha pasi iyo KDE Edu, lsezvaunenge uine mumabhuku eiyo chero KDE desktop. Kana iwe uine imwe desktop, unogona kuzviita kubva kune yako webhusaiti yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Google Zhizha reCode vadzidzi vanoita KDE Edu kunyangwe zvirinani
Firefox Quantum yatove mune yayo beta vhezheni
Yakaonekwa yekuchengetedzwa kukanganisa muKernel yegore 2015